Le ngcamango ye-iOS 16 yazisa iziko elitsha lolawulo kunye namawijethi asebenzisanayo | Iindaba ze-iPhone
Le ngcamango ye-iOS 16 yazisa iziko elitsha lolawulo kunye namawijethi asebenzayo
Ingelosi Gonzalez | 24/05/2022 12:00 | iOS 16
Sishiyeke kwiiveki ezimbini kuphela ukuqala komdlalo I-WWDC22. Ngelo xesha siza kubona iinkqubo zokusebenza ezintsha ze-apile ebesithetha ngazo kangangeenyanga. I-iOS 16 ijonge ukuqhubeka noyilo lwayo olungashukumiyo iminyaka emininzi, kodwa izimisele ukubandakanya izinto ezintsha ezisebenzayo kunye nenkqubo yesaziso ephuculweyo. Ngayo yonke into evuzayo kunye nesehlo esithile uNicholas Giho upapashe a Ingqikelelo ye-iOS 16 ebonisa isikrini esitshixa ngokwezifiso, iiwijethi ezisebenzisanayo kunye neziko elitsha lolawulo, phakathi kwezinye izinto ezintsha esikuxelela zona ngezantsi.
Umbono emva kombono, sicinga ukuba yintoni entsha kwi-iOS 16
Ngaphambi kokuba uqale ukuhlalutya i umxholo, imele igxininiswe into yokuba iyeyona ipapashiweyo kakhulu ukuza kuthi ga ngoku. Ukudibanisa kunye ne-iPhone mockups kuphumelele kakhulu kwaye iimpawu eziveziweyo zisebenza ngokupheleleyo. Imbi kakhulu iApple ayizukubonisa zonke iindaba, iya kuba yimpumelelo.
Ingcamango iqala nge rhoqo, into ekuthethwe ngayo ixesha elide. Eli nqaku lihlala likwisikrini liya kuvumela i-iPhone ukuba isikrini sisoloko sivuliwe kodwa simnyama xa i-iPhone itshixiwe. Ngale ndlela sinokufikelela kulwazi ngaphandle kwesidingo sokuba isikrini sivuleke ngokupheleleyo. Kwakhona kubandakanyiwe kukukwazi lungisa iindlela ezimfutshane kwii-apps ezithile ukusuka kwisikrini sokutshixa ngee-icon ezantsi.
Siyaqhubeka nge uyilo ngokutsha zonke iOS 16 icons ngeyona ndlela icocekileyo ye-macOS. Ukongeza, ukuba kunokwenzeka ukongeza iThala leencwadi kwi-dock ye iOS. Enye yezinto ezintsha esizilindeleyo kwi-iOS 16 (kwaye siyakholelwa ukuba siya kuba nayo kuhlelo lokugqibela lwe-Apple) iiwijethi ezisebenzisanayo, izinto ezibekwe kwiscreen sokutshixa esinokusebenzisana nazo. Imizekelo yazo: ukusebenzisana nokudlala, kunye ne-app yezempilo kunye nokunye.
Kukwaqukwe a iziko elitsha lolawulo ukuphelisa iigridi ze-1 × 1, ukuvula ithuba lokudibanisa izinto ezahlukeneyo ezinobungakanani obuhlukeneyo njengokukhanya kwi-4 × 1. Eli ziko lolawulo lifana kakhulu nelo likwi-macOS, jonga kwaye uya kubona. Okokugqibela, utshintsho oluncinci oluthathu luyadityaniswa, olufana nokuba nokwenzeka kokuthintela usetyenziso oluthile, isaziso esincinci sokuba ibhetri yethu iyaphela, kunye nemowudi yenkumbulo yesibali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 16 » Le ngcamango ye-iOS 16 yazisa iziko elitsha lolawulo kunye namawijethi asebenzayo
USebastian Vettel uleqa isithuthuthu isela elibile ii-AirPods zakhe enkosi kwi-app ethi "Khangela"
Ulahlekelwa yi-Apple Watch kwi-Disney World kwaye bahlawula i-$ 40.000 ngekhadi lakhe